Cosmogony oo ka dhexjira kooxda Hopis - Afrikhepri Fondation
Waad ku mahadsantahay inaad jeceshahay boggayaga Facebook
IIBSO BOOK AMA SOO SAAR
Khamiis, Oktoobar 22, 2020
Welcome AFRICAN INITIATIONS
Cosmogony ee Hopi
8 daqiiqo akhri
0 / 5 Fiiro gaar ah: 5
Les Hopis waa qabiil reer Hindi ah oo ku nool Arizona (Mareykanka), oo ku yaal dhulalka buuraha leh. Magacooda waxaa loola jeedaa kuwa nabdoon. Odaygoodu waa hoggaamiyeyaal xagga diinta ah oo wata xigmad iyo caadooyin. Muddo dheer, waxay la wadaageen oo keliya dadka cadaanka ah xoqitaanadooda aqooneed, maadaama aan la ixtiraamin. Waqtiyadi way is beddeleen qaarna waxay soo gudbiyaan farriimaha nabadeed waxayna ugu baaqayaan aadanaha oo dhan inay doortaan inay beddelaan maskaxdooda iyo qaab nololeedkooda.
Waxaa naloogu abuuray meel dhulka hoostiisa ah Ruuxa weyn, Abuuraha. Wuxuu marka hore abuuray mid, ka dibna laba, ka dibna saddex. Waxaa naloogu abuuray siman, midnimo, nolol xagga nolosha ah, halkaasoo noloshu waarayso. Waan ku faraxnay oo waxaan nabad la galnay ragga aan wada joognay. Wax walbana way badnaadeen, waxaa na siiya Dalkeenna Hooyo ee naloogu talagalay. Ma ahayn inaan beero ama aan shaqaysanno si aan cunto u helno. Cudurka iyo dhibaatooyinka jira lama oga. Sannado badan ayaan si farxad leh ugu noolaan jirnay weligeedba lambarkeenuna way sii kordhayeen.
Markii uu ruuxa weyni abuuray, wuxuu sidoo kale na siiyey amar ama sharciyo ah in aan ixtiraamno. Waxaan u ballanqaadnay inuu ixtiraamo si ay u noqdaan kuwo nabad ah, iyaga oo isticmaalaya xeerar si farxad leh ugu noolaan kara dhulkaan oo uu abuuray oo naga dhigay. Laakiin tan iyo bilowgii, wuxuu naga digayaa in aynaan jirrabayn waxyaabo gaar ah oo naga horjoogsan kara habkan ugu fiican ee nolosha.
Dabcan, waxaan ku raaxeysanahay waxyaabo badan oo noloshan ah, wax yarna, waxaan jebinay amarradii Abuuraha isaga oo fulinay wixii uu nagu amray inaanaan sameynin. Sidoo kale, wuu ina ciqaabayaa isagoo inaga dhigaya waxa aan maanta nahay, naf iyo jir ahaanba. Wuxuu dhahay: "Wixii hadda ka dambeeya, waa inaad naftaada isku filnaataa. Waad bukon doontaa, cimrigaaguna waa koobnaan doonaa.
Wuxuu ku sameeyay jirkeenna ku saleysan laba mabda ', wanaag iyo shar. Dhinaca bidix wuu fiicnaanayaa maxaa yeelay waxa ku jira wadnaha. Dhinaca midig waa xun yahay maxaa yeelay qalbi ma leh. Dhinaca bidix waa wax laga xumaado laakiin waa xikmad. Dhinaca saxda ah waa caqli badan oo xoog leh laakiin ka maqan xigmad. Mar walba waxaa jiri doona dagaal udhaxeeya labada dhinac, marka talaabooyinka aan qaadi doonana waa inaan go'aan ka gaarno midka ka xoog badan, xumaanta ama wanaagga.
Waxaan si wanaagsan u noolaan jirnay sannado badan, laakiin aakhirka sharku wuxuu cadeeyay inay tahay tan ugu xoog badan. Dadka qaarkii waxay hilmaameen ama iska dhego tireen sharciyada Ruuxa Quduuska ah, waxayna markale bilaabeen inay sameeyaan waxyaabo ka soo horjeedda awaamiirta. Waxay noqdeen ashyaaleyaal, oo waxyaabo badan ugu abuura faa iidada shaqsiyadooda, isla markaana aan mar dambe la wadaagin sidii ay ahaan jireen waagii hore. Tani waxay dhalisay kala qaybsanaan weyn maxaa yeelay qaar baa wali rabey inay raacaan tilmaamaha asalka ah oo ay si fudud ugu noolaadaan.
Kuwa ugu hal-abuurka badan, caqliga leh laakiin aan lahayn xigmad, waxay sameeyeen waxyaabo badan oo burburin kara noloshooda oo ku hanjabeen inay baabi'inayaan qof walba. Waxyaabo badan oo aan maanta aragno ayaa lagu yaqaannaa inay jireen waqtigaas. Ugu dambeyntiina, akhlaaq xumo ayaa dhacday. Nolosha dadka waxaa ku kharribmay xorriyad badan oo xagga bulshada iyo galmo ah. Xitaa haweenka iyo gabdhaha Kikmongwi (amiirrada) ayaa la saameeyay, kuwaas oo dhif iyo naadir ku noqday guryahooda si ay u daryeelaan shaqooyinka guriga. Iyo hoggaamiyeyaasha diimeed ee waaweyn waxay lahaayeen isla dhibaatada la mid ah tii Kikmongwi. Markiiba hoggaamiyeyaashii iyo dhammaan kuwa qalbi wanaagsan leh ayaa walwalsanaa sababta oo ah nolosha dadku waxay ku dhowdahay inay gacantooda ka baxdo.
Kikmongwi wuxuu soo ururiyey wadaaddadii sare. Waxay sigaar cabbeen oo waxay u duceeyeen caawimaad si loo helo hab lagu xaliyo musuqmaasuqa. Waxay kulmeen dhowr jeer ugu dambeyntiina qof ayaa soo jeediyay inuu baxo oo uu helo meel cusub oo uu ku bilaabo nolol cusub.
Aragtida adduunka maanta
Waxay badanaa maqli jireen dhawaqyo kor u kacaya oo ka imanaya xagga sare. Waxay ogaayeen in qof ku noolaan karo halkaas. Waxaa la go’aamiyey in fikirkan la baaro. Waxaan si kooban u sharraxi doonaa sababta oo ah sheegitaanka sheekada oo dhami waxay qaadan doontaa waqti dheer.
Iyaga oo hibo leh, waxay abuureen shimbiro. Waxaan magacaabi doonaa seddex. Laba waxaa lagu yaqaanaa xooggooda iyo xawaarehooda, kisa (gorgorka) iyo lepavowkaya (liqidda). Midka saddexaad wuxuu ahaa moochnee (mockingbird). Duulimaadkiisa waa mid laga xumaado laakiin waxaa lagu yaqaan inuu yahay qof caqli badan. Midkood kasta waxaa loo abuuray wakhtiyo kala duwan heeso sixir, qiiqa tubaakada iyo salaadda, iyo ciid iyo dhareer daboolan suuf cad (ova). Midkastaba si xushmad leh ayaa loosiiyay oo waxaa lasiiyay tilmaamo ku saabsan himiladiisa, hadii uu guuleysto Labadii ugu horreysay waxay ku guuldarreysteen inay gaaraan cirka dusheeda laakiin kan saddexaad, moochnee, wuxuu dhex maray furitaan wuxuuna helay adduunkan.
Dunida cusubi way qurux badnayd. Dhulku wuxuu ahaa cagaar iyo ubax buuxda. Shimbirtu waxay raacday dhammaan tilmaamaha. Caqligiisa caqliga ayaa ku hogaamiyay jiritaanka isaga oo loo maleynayay inuu raadinayo. Oo markuu helay, duhurnimadii ayay ahayd markii Maasau'u, Ruuxa weynaa, uu diyaarshay cuntadiisa. Corn on cob wuxuu taagan yahay dabka. Shimbiraha ayaa soo degay oo degay saqafka gurigiisa (kisi) wuxuuna ku dhawaaqay imaatinkiisa.
Maasau'u ma uusan soo booqan soo booqdayaasha maxaa yeelay xigmaddiisa iyo dareenkiisa urta ayaa uga digtay inuu qof imanayo. Si xushmad leh ayuu ugu salaamay wuxuuna ku casuumay inuu fadhiisto. Wadahadalkooduna wuxuu ahaa mid kooban: "Maxaad halkaan u joogtaa? Muhiim ma noqon doontaa? ” "Haa," ayuu ku jawaabay Moochnee, "waxaa halkan iiga soo diray dad dhagar qabayaasha. Waxay rabaan inay u yimaadaan dunidaada oo ay kula noolaadaan maxaa yeelay jidkooda noloshoodu waa musuqmaasuq. Idinkoo oggalaanshahaaga ah, waxay jeclaan lahaayeen inay halkan kula yimaadaan oo ay nolol cusub bilaabaan. Taasi waa sababta aan u imid ”. Maasau'u ayaa si xikmad leh oo xushmad leh ugu jawaabay, way iman karaan.
Shimbirtu waxay ku noqotay farriintan maskii. Intii uu maqnaa, Kikmongwi iyo hoggaamiyeyaashu waxay sii wadeen tukashada oo sugayaan soo laabashadiisa guusha leh. Markuu ku soo noqday warka wanaagsan ee ka yimid adduunka cusub iyo ogolaashadii Maasau'u, aad bay ugu farxeen.
Haddaba su’aashu waxay ahayd sidey u gaaran inay gaaraan dunida ugu sarreysa. Waxay dib ugu noqdeen sigaar cabista iyagoo u duceeya caawimaad. Aakhirkii, dhammaantood waxay oggolaadeen inay beero geed kori doona oo u adeegi doona dariiqa. Waxay beero abuur shalavee (isbuun), duceeya oo ku heesay gabayo sixir ah. Geedku wuu weynaanayaa oo weynaadaa ilaa uu cirka gaaraa laakiin laamaheeda ayaa aad u ifaafsan oo aad u tiro badan oo u janjeera dhanka cadaadiska dhulka kor ku xusan oo kuma uusan guuleysanin wareegga cirka. Waxay beero abuur cusub, markan waa lougu (geed). Wuxuu ku koray sidii ay u gabyeen heesahooda sixir. Geedkani wuxuu ahaa mid adag oo xoog badan. Waxay xaqiiqdii inuu kanuna dhici doono, ayay u maleeyeen. Laakiin may ahayn guul maxaa yeelay laamaheeda sidoo kale way foororsadeen markay la soo xiriiraan sheyga adag. Waxay beero abuur cusub. Markan waxay ahayd tii loo yaqaan (caws). Maaddaama ay ku dhammaatay heer sare, waxay ku guuleysatay inay cirku duudduubto oo ay gasho dunida cusub.
Intaas oo dhan, waxaas oo dhan waa la qariyey. Kaliya dad hufan, wanaag leh, iyo qalbi qalbi leh ayaa loo sheegay qorshooyinka looga tagayo adduunka musuq-maasuqa ah. Waxay diyaar u ahaayeen inay baxaan oo isla markii ay ogaadeen in isku daygu uu guuleystey, waxay bilaabeen inay fuulaan warshadda, iyagoo nasanaya inta u dhexeysa xubnaha cawsduurku, sidaasna ay ku sii wadaan jidkooda xagga furitaanka.
Markay yimaadeen dunidan, wax walbaa waxay ahaayeen qurux iyo nabad. Dhulku wuxuu ahaa nin geesi ah oo aan lagu xadgudbay. Aad bay u faraxsanaayeen. Way gabyeen oo farxad bay ku cayaareen, laakiinse Farxaddoodu way waayeen, maxaa yeelay habeenkaas gabadhii amiirradu kolkiiba si kedis ah ayay u dhimatay. Qof walba wuu murugooday oo walwalsanaa. Dadku midba si buu u eegay midba midka kale. Xarago ayaa la tuuray. Waxay ka dhigtay inay u maleeyaan inuu sixir ama qof laba qalbi leh uu ku jiro.
Kikmongwi wuxuu lahaa quwad aad u weyn wuxuuna ku qasbanaaday inuu u isticmaalo xasilinta walaaca dadkiisa. Wuxuu sameeyay kubad yar oo bur ah oo hadhuudh ah taasoo uu kor ugaga tuuray kooxda. Qofka madaxa uu kubad qabsado waxaa iska leh dambiilaha. Waxay ku dhacdaa madaxa gabadha yar. Waxay si dhakhso ah u go'aansadeen inay ku tuuraan furitaanka taasoo horseeday marin-habaabin. Waxay ahayd inay ka takhalusaan xumaantooda maxaa yeelay waxay rabeen inay nabad ku noolaadaan dhulkan cusub. Laakiin saaxiraddu waxay baryay naxariistooda, iyadoo u sheegtay in inta lagu guda jiro safarka dheer ee iyaga sugaya, ay la kulmayaan carqalado badan iyo khataro nooc kasta leh markaa markaa, adeegyadiisu aad bay u faaiidaysan doonaan maxaa yeelay iyadu waxay leedahay awood ay kula dagaallanto xun. Waxay ku casuuntay Kikmongwi inay fiiriso dhulka hoostiisa. Wuxuu eegay oo arkay cunuggiisa oo si farxad leh ula cayaaraya carruurta kale ee dhulka hoostiisa oo aan dhammaantood ku laaban doonno geerida ka dib. Waa la badbaadiyey, laakiin halkaas ayay uga tageen, iyada oo keligood ah, laga yaabee inay rajeynayso inay ku halligto sabab aan la garanayn.
Kulanka ugu horreeya ee Ruuxa Weyn ee adduunkan
Waxay ahayd halkan in Ruuxa weyn u muuqday markii ugu horeysay ee dhulka, wuxuuna iyaga siiyaa tilmaamo ku saabsan sida loo noolaado iyo safarka. Waxay u qaybsameen kooxo, koox walbana doorta madaxdeeda. Them ears before them ears ears them ears ears them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them them Hortiina wuxuu hor dhigay dhegaha hadhuudh iyo cabbir kala duwan. Wuxuu usheegay inay qaataan dhagaxa hadhuudhka ee ay tahay inay ku safraan safarkooda si ay ugu filnaadaan oo ugu noolaadaan una sii noolaadaan. Midkood, waxay si xamaasad leh u qaateen dhegaha ugu dheer uguna fiicnaa ilaa ay ka yaraayeen. Ma aysan garan inay ahayd xigmaddooda la tijaabinayay. Dhagaha ugu yar waxaa qaatay hogaamiyaha ugu khushuucaya. Oo markaasaa Ruuxii weynaa wuxuu iyagii siiyey magacyadoodii iyo afafkoodii, oo lagu aqoonsado. Kii ugu dambeeyay ee qaatay dhegaha ugu yar ee hadhuudhka waxaa la odhan jiray HOPI.
HOPI kaliya maahan inay "nabad noqoto", laakiin waa inaad adeeco oo aad aaminto tilmaamaha Ruuxa weyn, ma aha inay ku rogrogto wax baristiisa raad raac ama awood iyo sinaba uma xumayn karto hab nololeedka Hopi.
Cosmogonies: Khuraafaadka waaweyn ee abuuritaanka adduunka
2 cusub oo ka yimid € 14,70
4 ayaa laga isticmaalay 14,00 €
Iibso 14,70 €
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Oktoobar 22, 2020 3:07 am
Marley - Documentary (2012)
Olaudah Equiano, oo ah addoonsiga reer Nigeria oo noqday nin weyn oo ka tanaasulay xukunka
Addoonsiga iyo midabtakoorka
Tilmaamaha Shuruppak, qoraalka Sumerian ayaa loo tixgeliyey sida horudhaca xeerarka 10
Nala soo xiriir adoo isku xiraya hal guji oo ku yaal meerkani
QORAAL QORAAL AH SITE-KA
Adoo gujinaya astaan, waad tafatiri kartaa qoraalkaaga oo daabici kartaa. Ku xir:
Qoraayaasha, cilmi baarayaasha, saynisyahannada, gudaha, taariikhyahannada, macallimiinta iyo qorayaasha wax qora, ayaa noqda ka qayb qaataha.
Categories Xulo qayb Si loo tirtiro AFRIKHEPRI-TV WAQOOYINKA IYO FASHIGA KOOXDA LABORKA DEJINTA AFRICAN CUISINE HOGAANADA MADAXA CULUS madadaalo documentary CARRUURTA DEEGAAN ADDOONSIGA Xaalad dhaqameed XAALADAHA SHAQADA AFRICAN WOMEN FURSADAHA WALBA GARGAARKA DEGDEGA IYO DALKA AFRICAN INITIATIONS DIIWAANGELINTA / login BARNAAMIJYADA CIIDAMADA IYO GARGAARKA XIGASHO CODKA KAMA dukaanka LIVE TV BUUGSIGA SI AAD BARNAAMIJKA AUDIO Buugga PDF MUUSUL MUUQAAL AH MUSIC NEWS, NEWS GARGAARKA PARADIGM KAMITE FADLAN AFRICAN FIKRADAHA IYO WAALIDIINTA PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY Philosophy iyo Cilmi-nafsiga Caafimaadka iyo Dawada CIYAARAHA gabayo PSYCHART DAAWEYNTA XAALADAHA AFRICA CAAFIMAADKA IYO DARYEELKA BARNAAMIJKA IYO MYSTIA SHOPPING JIIDNADA IYO DALKA SPORTS TEXT OF MATTHIEU GROBLI GURYAHA / NEWS VIDEOS Web-TV